Tsentsina ny Lalan'atodinaina
ianao eto: Home bevohoka Tsentsina ny Lalan'atodinaina
Eo ho eo ny iray amin'ny efatra raharaha ny vehivavy noho ny tsy fiterahana dia tsentsina ny Lalan'atodinaina. Izany dia ao amin'ny Lalan'atodinaina fampiraisana, satria nandray atody avy amin'ny ovaire, ary ny tafiditra ny tsirilahy. zygote, niforona araka ny Fampitambarana lahy sy vavy sela firaisana ara-nofo, dia midina any an-trompes utérine dia mampitohy lavaka, ary aiza no miraikitra amin'ny rindrina. Fa ny ain'ny vehivavy io aretina, ankapobeny, fandrahonana tsy misy, fa fitadiavana sakana ao amin'ny Lalan'atodinaina (na dia tahaka ny Nail fanitarana bevohoka) mahasakana ny dingana ara-dalàna ny kibo mitranga.
Ny antony tsentsina ny Lalan'atodinaina kokoa:
Mahasoa sy mamohehatra neoplastic dingana ao amin'ny Lalan'atodinaina.
Nitarika vokany ara-pitsaboana sy fandidiana fitsaboana ny fanalan-jaza eo amin'ny kibo taova.
Ny resy ny taovam-pananahana tioberkilaozy.
Hatrany am-bohoka ara-dalàna ny firafitry ny Lalan'atodinaina.
Areti-mifindra ny taovam-pananahanao,.
Ny levitra ny hormonina rafitra.
Tsentsina ny Lalan'atodinaina: soritr'aretina.
Matetika io aretina manana pitsaboana fa stёrtuyu. Tsentsina ny Lalan'atodinaina, soritr'aretina, izay tsy mazava tsara naneho, ary koa ny tonga fotoana tsy fisian'ny fotoana amin'ny tsy bevohoka, Izy Manomboka hanelingelina ny vehivavy dia matetika raha tsy aorian'ny maro ny ezaka tsy nahomby mba hahazoana bevohoka. Ihany indraindray misy toy izany famantarana, toy ny miverimberina fanaintainana eo ambany kibony, manana ny mpitan-toetra. Azonao atao ihany koa ny hiaina fanaintainana mandritra ny tonga fotoana, mavo be marary mitsika, ary afa-tsy ny fanaintainany sy ny fanaintainana mandritra ny firaisana.
Taorian'ny famoriam-bola lalina ny soritr'aretina, nirotsaka ny fizahana aretina fomba fiasa mba hanamarinana ny aretina. Fototra fomba fa ny tapa-kevitra ny tsentsina ny Lalan'atodinaina:
Transvaginalьnый gidrolaparoskopicheskiй fomba.
Fitsaboana ny tsentsina ny Lalan'atodinaina.
Fitsaboana ny tsentsina ny Lalan'atodinaina dia tena miankina amin'ny hoe tena mihazakazaka izany aretina, ny antony izay efa nahatonga azy sy ny toetrany ny soritr'aretina. Amin'ny toe-javatra sasany, dia ampy ny normalize ny hormonina sy ny manafoana tafahoatra fihenjanana. Amin'ny aretina milaza zavatra mampiseho antibacterial zava-mahadomelina, physiotherapy, ary amin'ny toe-javatra sasany fandidiana. Na ahoana na ahoana, ny tarehin'ny voalohany Tobala tsentsina ahiahiana tokony hitady torohevitra ara-pitsaboana avy hatrany.